European Union na-eziga nde mmadụ na Uganda na South Sudan iji lụso Ebola ọgụ mgbe njem nleta na-adị nchebe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » European Union na-eziga nde mmadụ na Uganda na South Sudan iji lụso Ebola ọgụ mgbe njem nleta na-adị nchebe
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Sudan • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Kenya, Uganda, South Sudan, na Democratic Republic na-eche nche ma na-enwe nsogbu na-emepe emepe. Uganda na-eguzo dị ka ezigbo ihe atụ nke nwere mgbasa nke ọrịa Ebola na-egbu egbu na mpaghara ha ma na-echekwa ndị njem nleta. Enweghị ọrịa Ebola na Kenya. Gọọmentị Kenya enyela onyinye nke nde 350 ($ 4) maka ya Oria Ebola nke Kenya Nkwadebe na Azịza. Kenya adịghị emetụta ndị Oria Ebola ntiwapụ ugbu a mana ọ nwere ihe egwu nwere ike ịgbasa n'ihi ọnọdụ ya dị ka ọdụ ụgbọ njem mba na mba.
Njem nleta na-adị nchebe na Uganda na Kenya, mana ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na ndị ọrụ gọọmentị na-echegbu onwe ha banyere mmetụta PR nke akụkọ a nwere na mgbasa ozi ụwa na ụlọ ọrụ njem na njem. A ga-enyocha onye ọ bụla si na South Sudan banye na Ebola maka ọrịa Ebola.
Onye ọrịa nke abụọ nwụrụ na Uganda. East African County amachibidoro nzukọ ọha na eze na mpaghara ọdịda anyanwụ Kasese ka ndị isi gbalịrị ịnwe nje ahụ ma tinye nnukwu mbọ iji kpuchido ndị ọbịa na mpaghara ahụ. Uganda ogwula ụfọdụ ndị ọrụ ahụike 4,700 ọgwụ karịrị ụlọ ọrụ 150 na ọgwụ nnwale emere iji chebe ha pụọ ​​na oria Ebola.
Onye nke abuo tara bụ onye ezinaụlọ nke nwa nwoke nwụrụ anwụ 5 afọ gafere ókèala Uganda na nje ahụ mgbe ị gara olili ozu na DRC. Onye nke atọ n’ezinaụlọ a na-agwọ ọria kpụ ọkụ n’ọnụ.
Mgbe ntiwapụ na Democratic Republic of Congo na-aga n'ihu, EU ekwupụtala n'ihu ego mberede nke € 3.5, nke million 2.5 nde bụ maka Uganda na million 1 nde maka South Sudan. Ihe enyemaka a ga - eme ka nchọpụta ngwa ngwa na mmeghachi omume gbasara nsogbu Ebola. Ego taa na-abịa n'elu of 17 nde na EU maka ego Ebola kemgbe 2018 na Democratic Republic of Congo na mgbochi na njikere omume na Uganda, South Sudan, Rwanda na Burundi.
na Jizọs bụ Kraịst Ndị Stylianides, Kọmishọna maka Enyemaka Onyinye Enyemaka na Nsogbu njikwa na EU Ebola nhazi kwuru, sị: “Anyị na-eme ike anyị niile iji chekwaa ndụ ma kwụsịkwa ọrịa Ebola ọzọ. Taa, ọrụ anyị abụghị naanị inyere Democratic Republic of Congo aka, kamakwa inyere mba ndị agbata obi ya aka dịka Uganda. N'ebe a, ego anyị na-enyere aka na nyocha, na-arụ ọrụ na ndị obodo, na ịkwalite ikike mpaghara maka mba ndị a iji mee ihe n'oge ma dị irè. Anyị na-agba mbọ ịnọgide na enyemaka anyị iji weta ọrịa a na njedebe, ọ bụrụhaala na ọ ga-ewe. "
Na nhazi nke ndi nyere onyinye mba uwa ndi ozo n’usoro nke World Health Organisation’s Regional Strategic Ebola Response and Preparedness Plans, ego EU n’enye onyinye site na usoro nke gunyere:
ike nke onyunyo onodu onodu obodo, ulo oru ahu ike na ebe nbanye (ebe igafe oke);
ọzụzụ nke ndị otu ngwa ngwa ngwa ngwa;
ọzụzụ nke ahụike na ndị ọrụ na-aga n'ihu na kọntaktị-nyocha, mgbochi ọrịa na njikwa njikwa, nkwado psychosocial, na olili dị mma ma dị mma;
- iwulite ikike ime obodo site na ịkwadebe ụlọ ọrụ ọgwụgwọ; na
ime ka ndi mmadu mara ihe.
Ndị ọkachamara ahụike mmadụ na EU na Democratic Republic of Congo, na Uganda na mpaghara ahụ na-achikọta na ha na ndị ọrụ ahụike na mba ndị a, ndị Healthtù Ahụ Ike Worldwa na ndị mmekọ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
EU nọ na-enyere mba dị iche iche aka na mbido ọgụ kemgbe mmalite nke ntiwapụ ahụ na 2018, na-enye nkwado ego, ndị ọkachamara, iji ọrụ ụgbọ elu ECHO na-ebuga ihe ma rụọ ọrụ EU Civil Protection Mechanism.
Na 11 June 2019, Mịnịsta na-ahụ maka Ahụike nke Uganda gosipụtara na onye ọrịa mbụ nwalere ọrịa Ebola (EVD) na mpaghara Kasese, na ndịda ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Mpaghara emetụtara na Democratic Republic of Congo na mba ndị agbata obi ya, threattù Ahụ Ike Worldwa na-enyocha iyi egwu nke nnyefe nje na-agafe oke mgbe niile.
Ngalaba na-ahụ maka enyemaka ndị mmadụ na EU yana Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na United Kingdom na-arụ ọrụ ugbu a na ndịda ọdịda anyanwụ Uganda, yana nsonye nke ọkachamara mpaghara ahụike sitere na European Commission.
EU kwadokwara ego na mmepe ọgwụ mgbochi Ebola na nyocha banyere ọgwụgwọ Ebola na ule nyocha.
ụlọ Burundi ike ebu ọrụ onye nlekọta obodo obodo kwadoro Congo kọntaktị nwere gara n'ihu na-atụnye ụtụ akara County nsogbu ngafe na-agafe ugbu a kwa egbu egbu Nyefee Democratic Democratic Republic of Congo ngalaba e mere nchọpụta nwụrụ ọrịa District eme ọgwụ East East African Oria Ebola mmetụta mgbalị mberede njedebe ntinye EU European European Commission European Union ọkachamara ọkachamara ụlọ ọrụ ezinụlọ agha ego nkwado ego ọrụ ụgbọ elu ego ndị ọrụ gọọmentị nye ahụ ike nlekọta ahụike Inyere aka igwe ndi mmadu June dị nnọọ Gọọmentị Kenya Alaeze ala akara Main jikoro etiti ọgwụ so nde onye ozi ozi agbata obi mba ndị agbata obi isi arụmọrụ ntiwapụ package òkè mmekọ atụmatụ ihe ọnụ ọgụgụ mmadụ ọnọdụ mma nwere PR nkwadebe mgbochi chebe nchedo mpaghara anọgide mba Republic nke Congo research nzaghachi n'ihe ize ndụ Rwanda mma zọpụta nke abụọ na-arịa ọrịa South Sudan mgbasa ndi ozo guzo Kwụsị usoro Sudan onunu akwado surveillance ọrụ ìgwè n'ókèala ule Mịnịsta Mpaghara iyi egwu Ndị njem njem ọzụzụ Transportation njem na njem njem na njem ụlọ ọrụ ọgwụgwọ agwọ ọrịa Uganda otu United Kingdom ojiji onye agha virus West Western ndị ọrụ echegbu onwe ya